Otu esi eme ka onyinyo translucent na Photoshop
A na-eji onyinyo ma ọ bụ thumbnails eme ihe na saịtị dị iche iche maka ozi, nchịkọta na ọrụ ndị ọzọ. Ihe omumu a bu uzo esi eme ka onyinyo ahu di na Photoshop. Maka ọrụ anyị chọrọ ihe oyiyi. Enwere m foto dị otú ahụ na ụgbọ ala ahụ: N'ileba anya na ihe ndọtị, anyị ga-ahụ na a na-ekpochi oyi akwa ahụ aha ya bụ "Azụ" (akara mkpọchi na oyi akwa).
Anyị na-arụ ọrụ na ngwa ngwa Portraiture
Na ụwa nke Photoshop, ọtụtụ nkwụnye plug na-eme ka ndụ onye ọrụ ahụ dị mfe. Ihe mgbakwunye bụ mmemme mmemme nke na-arụ ọrụ na Photoshop ma nwee ọrụ ụfọdụ. Taa, anyị ga-ekwu okwu banyere nkwụnye sitere na Imagenomic akpọ Portraiture, na ịmatakwu banyere ya dị irè.
Kwado mgbagwoju anya na Photoshop
Akpụkpọ anụ zuru oke bụ isiokwu maka nkwurịta okwu na nrọ nke ọtụtụ ụmụ agbọghọ (ọ bụghị naanị). Ma, ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịnya isi na ọbụna nsogbu n'enweghị ntụpọ. Ọtụtụ mgbe na foto anyị na-ele anya dị egwu. Taa, anyị setịpụrụ ihe mgbaru ọsọ iji wepụ ntụpọ (ihe otutu) na ọbụna akpụkpọ anụ na ihu, nke a na-akpọ "ihe otutu" na-apụta ìhè, n'ihi ya kwa, ọbara ọbara na ebe ndị na-acha ọbara ọbara dị.
Ụzọ iji wepu nsị na Photoshop
Na-enweghị nkà nke ịrụ ọrụ na n'ígwé, ọ gaghị ekwe omume ịmekọrịta zuru ezu na Photoshop. Ọ bụ ụkpụrụ "puff pie" nke na-edozi usoro ihe omume ahụ. Ihe nkedo di iche iche di iche iche, nke obula nwere ihe di n'ime ya. Na "ọkwa" ndị a, ị nwere ike ime ọtụtụ omume: oyiri, dichaa ya dum ma ọ bụ akụkụ, gbakwunye ụdị na nzacha, gbanwee opacity, na ihe ndị ọzọ.
Wepu ndabere site na mbido na Photoshop
Mgbe ị na-ekepụta kọlọtọ na ihe ndị ọzọ na Photoshop, ọ dị mkpa mgbe ọ bụla iji wepụ ihe ndabere site na ihe oyiyi ma ọ bụ nyefe ihe site na otu mbiet gaa na nke ọzọ. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi eme foto n'enweghị ndabere na Photoshop. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ. Nke mbụ bụ iji Anwansi Wand ngwá ọrụ.
Idozi ihe na Photoshop
Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nyocha na-arụ ọrụ ahụ na anya, nke na-ewe oge na mgbalị. Photoshop na-agụnye ngwá ọrụ a na-akpọ "Bugharịa", ekele nke ị nwere ike ịmezi ihe ndozi na oyiyi ihe dị gị mkpa dị ka ị chọrọ. A na-eme nke a n'ụzọ dị mfe ma dị mfe.
Ndozi agba - agbagharị agba na onyinyo, saturation, nchapụta na ihe oyiyi oyiyi ndị ọzọ metụtara agba. A pụrụ ịchọ ntụzi agba n'ọtụtụ ọnọdụ. Ihe kpatara ya bụ na anya mmadụ anaghị ahụ otu ihe ahụ dị ka igwefoto. Ihe akụrụngwa ahụ na-edekọ naanị agba na onyinyo ndị dị adị n'ezie.
Mepụta ihe ọkụ na Photoshop
Ụdị nchịkọta nke Foto dị iche iche na-ele anya na ihe na-adịghị mma, nke bụ ihe mere ọtụtụ photoshoppers ka na-agbanye aka ha iji melite ma chọọ mma. Mana nke dị mkpa, ọ dị mkpa iji nyochaa ederede na-apụta ugboro ugboro n'ihi ihe dịgasị iche iche. Taa, anyị ga-amụta otu esi edepụta akwụkwọ ọkụ na Photoshop anyị kacha amasị.
Agba egbugbere ọnụ na Photoshop
Nhazi nke ihe oyiyi na-agụnye arụmọrụ dịgasị iche iche - site n'ịgbado ọkụ na onyinyo ịbịaru ihe ndị na-efu. Site n'enyemaka nke ndị ikpeazụ ahụ, anyị na-agbalị ịnwa ụka ma ọ bụ nyere ya aka. Ma ọ dịkarịa ala, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọdịdị ahụ, mgbe ahụ, onye na-ese ihe nkiri, bụ onye ji nlezianya mee nkata. Na nkuzi a, anyị ga-ekwu banyere otu esi eme ka egbugbere ọnụ gị na-enwu gbaa na Photoshop, dị ka na-ehicha ha.
Anyị na-echebe onyinyo ahụ na nwebisiinka
Ejiri iwu (stampụ ma ọ bụ mmiri) iji chedo nwebisiinka nke onye ahụ kere onyinyo (foto). Ọtụtụ mgbe, ndị ọrụ nleghara anya na-ewepu akara mmiri site na foto ma nyefee onwe ha ikike, ma ọ bụ jiri ihe eji akwụ ụgwọ maka n'efu. Na nkuzi a anyị ga-emepụta nwebisiinka ma anyị ga-ese onyinyo ahụ kpamkpam.
Kedu esi mee ederede ederede na Photoshop
Ịmepụta ederede transperenta na Photoshop dị mfe - dị nnọọ ka opacity nke jupụtara na zero ma gbakwunye ụdị nke na-edepụta ndepụta nke akwụkwọ ozi ahụ. Anyị ga-aga n'ihu n'ihu gị ma mepụta ederede iko n'ezie nke ga-esi na ya gafere. Ka anyị malite Mepụta akwụkwọ ọhụrụ nke ọkwa a chọrọ ma jupụta ebe a na nwa.
Wepu ndabere na Photoshop
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ nile na Photoshop chọrọ clipart - ihe eji emepụta onye ọ bụla. Imirikiti nke vidiyo na-apụtaghị n'ihu ọha na-anọghị na transperent, dịka anyị ga-achọ, ma na-acha ọcha. Na nkuzi a, anyị ga-ekwu banyere otu esi ewepụ ebe ndabere na Photoshop. Usoro otu. Ime anwansi.
Esi eweghachi foto na Photoshop
A na-ejikarị nchịkọta foto na-eme ihe oyiyi. Nhọrọ a na-ewu ewu nke na ọbụna ndị ọrụ na-amaghị ihe mmemme ahụ nwere ike ịnagide ịghaghachi foto. Ihe kachasị mkpa n'isiokwu a bụ iji iweghachite foto na Photoshop CS6, belata àgwà dobe ya na opekempe.
Imeri nsogbu nke enweghị RAM na Photoshop
Mgbe ị na-arụ ọrụ na Photoshop na kọmputa ndị na-adịghị ike, ị nwere ike ịhụ igbe na-emenye ụjọ banyere enweghị RAM. Nke a nwere ike ime mgbe ị na-echekwa nnukwu akwụkwọ, mgbe itinye nzacha "arọ" na arụmọrụ ndị ọzọ. Idozi nsogbu nke enweghi RAM Nke a bụ nsogbu n'ihi eziokwu ahụ bụ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile Adobe ngwanrọ na-agbalị iji mee ka ohere nke usoro ihe onwunwe dịkwuo elu na ọrụ ha.
Dejupụta oyi akwa ndabere na Photoshop
Nkịtị ndabere nke gosipụtara na palette mgbe ị na-ekepụta akwụkwọ ọhụrụ ka akpọchiri. Ma, o sina dị, ọ ga-ekwe omume ịrụ ụfọdụ omume na ya. A ga-ehichapụ oyi akwa a n'ozuzu ma ọ bụ akụkụ ya, ehichapụ (ọ bụrụ na e nwere ọkwa ndị ọzọ na palette), tinyekwara agba ma ọ bụ ụkpụrụ ọ bụla.
Mee ka eserese eserese site na foto dị na Photoshop
Foto ndị e depụtara aka na-adọrọ mmasị mara mma. Ihe oyiyi ndị a dị iche iche ma bụrụ mgbe niile. Site na nkà na nnọgidesi ike, ịnwere ike ịmepụta eserese eserese na foto ọ bụla. N'otu oge ahụ, ọ dịghị mkpa ọ bụla iji nwee ike ịbịaru, ọ dị mkpa ka ị nweta foto Photoshop na awa ole na ole nke oge n'efu.
Gwakọta foto abụọ n'ime otu na Photoshop
Photoshop na-enye anyị ọtụtụ ohere maka nhazi oyiyi. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ikpokọta ọtụtụ foto n'ime otu site na iji usoro dị mfe. Anyị ga-achọ foto abuo abuo na mkpuchi nkpuchi kachasị. Isi Iyi: Foto mbu: Foto nke abụọ: Ugbu a, anyị ga-ejikọta oge oyi na okpomọkụ na otu ngwakọta.
Gbanwee agba nke ihe na Photoshop
Ịgbanwe agba na Photoshop bụ usoro dị mfe, ma na-adọrọ adọrọ. Na nkuzi a, anyị ga-amụta ịgbanwe agba nke ihe dị iche iche na foto. 1 ụzọ Ụzọ mbụ iji dochie agba bụ iji ọrụ a rụzuru na Photoshop "Dochie Agba" ma ọ bụ "Dochie Agba" na Bekee. M ga-egosi gị ihe atụ kachasị mfe. Ụzọ a ị nwere ike ịgbanwe agba nke okooko osisi na Photoshop, yana ihe ọ bụla ọzọ.
Mepụta ederede oblique na Photoshop
Ịmepụta ma dezie ederede na Photoshop - abụghị ihe siri ike. N'eziokwu, e nwere otu "mana": ị ghaghị inwe ụfọdụ ihe ọmụma na nkà. Ihe a niile ị nwere ike inweta site n'ịmụ ihe na Photoshop na ebe nrụọrụ weebụ anyị. Anyị ga-enye otu nkuzi ahụ n'otu n'ime ụdị nhazi ederede - oblique. Tụkwasị na nke a, mepụta ihe edere ederede na arụ ọrụ.
Mepụta oghere maka foto na akwụkwọ na Photoshop
Na ndụ kwa ụbọchị, onye ọ bụla na-enweta ọnọdụ mgbe ọ bụla a chọrọ ka o nyefee otu foto maka akwụkwọ dị iche iche. Taa, anyị ga-amụta otú e si eme foto paspọtụ na Photoshop. Anyị ga-eme nke a iji chekwaa oge karịa ego, n'ihi na ị ka ga-ebipụta foto.